Wararka Maanta: Khamiis, Aug 2 , 2012-Kooxo bastoolado ku hubeysan oo Bartamaha Degmada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan ku toogtay Injineer caan ah
Inj. Cali Xaaji Shirwac oo arday ku sugan tuulada tarashinte (300) u qaybanyo qalab waxbarasho. Apr 2003 (HOL Files)
Wariyaha HOL ee Baladweyne C/raxmaan Diini ayaa sheegay in injineerka ay rag ku hubeysan bastoolado ku dileen xafiiskiisa oo ku yaalla bartamaha Baladweyne, iyadoo aan la ogeyn sababta keentay in la dilo injineerkan oo aad looga yaqaannay gobolka Hiiraan.
"Dilka injineerka waxaa ka dambeysay Al-shabaab, madaxa ayayna xabado uga dhufteen, wuxuuna injineerku howl ka bilaabi lahaa garoonka diyaaradaha ee Baldweyne," ayuu yiri guddoomiyha gobolka Hiiraan, C/fitaax Xasan Afrax oo la hadlayay BBC-da.
"Kumannaan qof ayaa la isugu geeyay xabsiga degmada Baladweyne, baaritaanno ayaana dadkaas lagu sameynayaan," ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka gobolka Hiiraan. Axmed Cismaan Cabdalla (Inji).
Magaalada Baladweyne ayaa gabi ahaan la xiray, iyadoo aysan jirin wax dhaqaaq ah oo ay dadku sameynayaan, ciidamaduna waxay galayaan meel walba si ay u baraan kooxihii dilka geystay.